As salaam al amiir
- Amiir Shiikh Xamdiin Khaliifat Al-thaanii
- Ra'iisul wasaare Xamdiin bin Jaasim bin Jiber Al-thaanii
qoomiyadihii tar tamaayay iyo Ingiriiska oo si nuuc kale ula dhaqmay
- Taariikhda 18 Diseembar, 1971
- Total 11,437 km2 km²
4,415km2 sq mi
- 2016 qiyaas 2,675,522
- Total $0.181 trillion
waqtiga bariga dhexe
Qatar waa wadan yar oo ku yaalo Bariga Dhexe. Wadanka qatar waa wadanka ugu taajirsan aduunka, ayada oo wali dhismo ku socoto, wadanka waxoo u dhisanyahay sida Imaaraatka Carabta , waxaa ku yaalo guryo dheer dheer oo aad u quruxbadan, waxeena ku dadaalooyaan wadanka horumarintiisa. wadanka waxoo leeyahay, shidaal aad u badan iyo saliid ceeriin oo aad u badan, wadanka waxoo la shaqeeyaa wadamada jabaan, talyaaniga, ingriiska, mareykanka, jarmalka iyo fransiiska. Caasimada wadanka waa Dooxa. wadanka waxoo ka midyahay Jaamacada Carabta.Qatar waxee markeeda hore ka tirsanaan jirtay Dawlada Cosmaniya sanadka marka oo ahaa 1872 ilaa 1914tii, siyaasiinteeda iyo wadanka ingriiska waxee mar hishiis ku kala saxiixdeen, dhinaca amaanka sanadka marka oo ahaa 1916dii iyo 1934tii, waa waqtigaas marka oo ingriiska qabsaday qatar, waxeena xornimada qaateen 1971dii. ciidamada qatar waxee mar ka mid ahaayeen, Dagaalkii Gacanka oo u dhaxeeyay QM iyo Ciraaq, sanadka marka oo ahaa 1991dii.
Qadar waxee leedahay taariikh aad u dheer, waxaa markeeda hore deganaan jiray, dad seefleey ah. qatar markeeda hore waxaa deganaan jiray, dad aad u yar oo u kala degan cid cid. sanadka marka oo ahaa 628 waxee raaceen diinta islaamka. sanadka marka oo ahaa 1760kii, wadanka waxaa soo galay dad la dhoho Al-thaanii iyo Al-khaliifa, waqtigaas neh waxaa jiray tartan xukun ah, oo kadhaxeeyo labada kooxood.
1783dii kooxda Al-khaliifa waxee qabsatay jasiirada Baxrayn, isla markaas neh waxaa meesha soo degay qoomiyadeeda. dhamaadkii 1790kii waxaa qatar si isbedel ah u qab qabsaday, dad ka socdo faarsiga, cumaan iyo burcad badeeda carabta. waqtigaas marka ee qatar qiil qiil ku jirtay, waxaa xukunka ku guuleestay Al-thaanii.1867dii waxaa hadaneh qatar ka dhacay tartan xukun ah, oo u dhaxeeyo labada qabiil, ingriiska ayaa soo dhaxgalay, waxoona ku qasbay labada qeebood in ee hishiiyaan. markaas neh waxee hishiis la sixiixdeen ingriiska, waa markii oo ingriiska maamulkiisa bilaawday. aqoonsiga oo ingriiska aqoonsaday qabiilka Al-thaanii, waxee noqotay mid jasiirada baxrayn ka go'do qatar. intii lagu jiray 1800, wadanka cumaan waxoo marar badan baroobeenaayay in oo dhul ka qabsado qatar, isla markaas neh oo dajiyo ciidankiisa. Qabiilka Al-thaanii waxaa mar la jiri jiray qabiil kale oo la dhoho (wahaab) iyo kuwo kale, 1913dii ilaa 1916dii ingriiska waxoo baroobeenaayay, in oo joojiyo, qabiilaha kale ee wahaab iyo qabiilka cusmaaniya. 1916dii ciidankii ugu danbeeyay ee cusmaniya waxee ka baxeen wadanka, waa waqtigaas marka oo ingriiska ku dadaalay dhinaca siyaasadiisa iyo dhaqaalaha. 1930kii waxaa bilaawday dhaqaalihii qatar.
Municipalities of Qatar in 2004
Dhismaha wadanka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
ka bilaabato sanadka marka oo ahaa 2000, qatar waxaa ka socotay, projekt coogan oo ah dhinaca dhismaha, gaar ahaan caasimada dooxa, iyo magaalo yaal badan. mardhow caasimada dooxa waxee noqon doontaa magaalo aad u ween, waxeena dabaqyahooda dheer dheer ka badnaan doonaan 1000000.
waxaa qoray Cabdicasis muxumed xuubse
Waxaa laga keenay "https://so.bywiki.com/w/index.php?title=Qatar&oldid=176044"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 13:15, 9 Luuliyo 2018.